10 Alternatives iTunes tsara indrindra azonao andramana amin'ny taona 2020 - Softwares
iTunes dia azo antoka fa tsy maintsy manana rindrambaiko amin'ny fidirana mozika, fahitalavitra, sarimihetsika sns. Na te hisintona na hihaino mozika ianao dia mamorona backup amin'ny iPhone na mitantana ny fitaovanao IOS dia azonao atao amin'ny fampiasana iTunes tsotra fotsiny. Na izany aza, mpampiasa IOS maro no nanomboka nitady safidy iTunes hafa satria Apple dia nanomboka nandao ny iTunes.
Miaraka amin'ny fanavaozana macOS Catalina vaovao sy farany, iTunes dia nizara ho fampiharana telo samy hafa (Podcast, Apple Music, ary Apple Tv), ny fampiharana tsirairay dia natao hampiasaina manokana. Ireo apps ireo dia mitantana ny fitantanana data rehetra izay notantanin'ny iTunes.
Kaonty Netflix maimaim-poana - Fomba tsara indrindra hiterahana
Maninona ireo mpampiasa iOS no mitady rindrambaiko solon'ny iTunes?
Betsaka ny antony. Nitanisa hevitra vitsivitsy etsy ambany izahay.
Mba hahatratrarana asa sasany izay tsy ho tratra mivantana amin'ny IOS Device ihany.
Mba hahazoana fidirana mivantana amin'ny data-dry zareo.
Mba hialana amin'ny olana amin'ny backup iOS na iOS.
Lisitry ny iTunes Alternatives tsara indrindra:
Waltr 2 dia misy ho an'ny Mac sy Windows ho an'ny fitsarana maimaimpoana. Mila mividy azy ianao hampiasa ny kinova feno, na dia tsy mora aza izany. Saingy, ny rindrambaiko dia iray amin'ireo safidy tsara indrindra ho an'ny iTunes. Azonao atao ny mampifandray ny findainao amin'ny tariby na amin'ny WiFi ihany koa. Afaka mamindra sary sy mozika ao anatin'ny segondra vitsy (ny fomba ahafahanao mamindra amin'ny alàlan'ny AirDrop.) Izy io dia manohana karazana rakitra rehetra. Ka, WALTR 2 dia mendrika ny denaria rehetra omenao.
MacX MediaTrans dia safidy hafa amin'ny iTunes, izay azo ampiasaina hamindra sy hamerenana data eo anelanelan'ny fitaovan'ny iOS. Mety hahasoa amin'ny famindrana mozika, horonan-tsary, ary sarimihetsika avy amin'ny Mac na fitaovana iOS rehetra. Raha tsy manana ny zavatra rehetra ilainao ny iTunes dia mety hahasoa anao ity iray ity. Azonao atao koa ny mamorona antso an-tariby amin'ny alàlan'ity rindrambaiko ity. Azonao atao ihany koa ny mitazona ny haino aman-jeryo amin'ny alàlan'ny encryption.
MusicBee koa dia mety ho mpilalao mozika mahatalanjona sy mpitantana mozika. Izy io dia manana fiasa sy fandrindrana maro mandrindra sy mitendry rakitra mozika.
Endri-javatra ny MusicBee:
Ny lohahevitry ny MusicBee dia azo ovaina. Noho izany, azonao atao ny manova azy araka izay itiavanao azy sy ny fanirianao.
Azonao atao ny manatsara ny kalitaon'ny mozika.
Azonao atao ny manafatra mora foana ny rakitra mozika rehetra avy any iTunes mankany MusicBee ao anatin'ny minitra vitsy monja.
Izy io dia manana ekipa 15-bandy mitovy amin'ny fanitsiana ny kalitaon'ny feo.
DearMob iPhone Manager dia rindrambaiko iray ihany. Azonao atao ny mampiasa an'io rindrambaiko io amin'ny zava-drehetra avy amin'ny famindrana rakitra mozika, horonan-tsary, famoronana backup ho an'ny fitaovanao, na zavatra hafa rehetra. Ny fijerin'ny rindrambaiko dia tsotra ihany koa ary mora ampiasaina izay manampy ny mpampiasa hampiasa ilay rindrambaiko tsy misy olana.
Endri-javatra momba ny DearMob iPhone Manager:
Izy io dia manana serivisy fitantanana audio manankarena.
Izy io dia manana fitaovana faneriterena marobe ao anatin'ny rindrambaiko.
Azonao atao ny mampiasa azy io mba hamerenana na hamerenana amin'ny laoniny ny fitaovanao amin'ny tsindry vitsivitsy.
Manampy ny mpampiasa hanafatra mora foana sy hanondrana rakitra misy endri-piarovana io.
Raha mitady safidy iTunes hafa tsotra miaraka amina endri-javatra sy fikirakirana mitovy amin'izany ianao, Anytrans no rindrambaiko ho anao.
Endri-javatra amin'ny Anytrans:
Anytrans dia aloa. Azonao atao ny mampiasa ny kinova maimaimpoana mba handefasana mozika fotsiny amin'ny iPod mankany Mac / PC.
Azonao atao ny mizaha, manova, mamindra rakitra amin'ny Anytrans.
Izy io dia manana ny interface tsotra indrindra.
MediaMonkey dia iray amin'ireo safidy tsara indrindra amin'ny iTunes miaraka amin'ny fitaovana mandroso. Izy io dia manana ny fitaovan'ny fitantanana haino aman-jery rehetra takiana aminao amin'ny fidirana iTunes.
Manampy ny fanesorana ireo rakitra anaovana dika mitovy.
Manampy amin'ny fampifanarahana mora foana amin'ny haino aman-jery amin'ny iOS sy ny fitaovana hafa izany.
Izy io dia manohana endrika audio maro, ao anatin'izany ny MP3, M4A, WMA, FLAC, ary maro hafa.
Azonao atao ny mamolavola sy manamboatra ny lisitry ny playlist anao, na amin'ny feo na amin'ny video.
Sady misy kinova aloa no maimaim-poana.
Raha mandeha ny anarana, SynciOS dia ampiasaina amin'ny fampifanarahana rakitra sy data amin'ny fitaovana iOS. Ity rindrambaiko ity dia manana fitaovana fitantanana mahavariana sy fipetrahana, izay mahatonga azy io ho tonga lafatra ampiasaina ho solon'ny iTunes.
Endri-javatra an'ny SynciOS:
Manohana ny famindrana haino aman-jery amin'ny lafiny roa izy io.
Manampy ny mpampiasa hamerina ny rakitra an-tariby rehetra sy handrindra rakitra toy ny e-book, mozika, horonan-tsary, sary, antso an-tariby ary maro hafa amin'ny iOS na fitaovana hafa.
Maimaimpoana tanteraka ny fidirana amin'ireo endriny rehetra.
SynciOS dia mamela ny mpampiasa hampiasa ireo fitaovana sy safidy hafa amin'ny fomba mora. Hanova ny lalanao amin'ny fitantanana mozika amin'ny fomba vaovao ihany koa izany.
Ity misy rindrambaiko iray hafa izay tonga miaraka amina endri-javatra marobe izay azonao ampiasaina ho solon'ny iTunes.
Endri-javatra ny doubleTwist:
Tena ilaina amin'ny fitantanana haino aman-jery miaraka amin'ireo kinova tena mifanentana aminy.
Azonao atao ny mampifanaraka ireo playlist anao amin'ny iTunes amin'ny fomba haingana sy haingana be.
Mamela ny mpampiasa hiditra mozika amin'ny alàlan'ny serivisy rahona toa Dropbox, OneDrive, ary Google Drive.
Dr.fone Transfer dia safidy hafa iTunes izay azo ampiasaina handefasana haino aman-jery sy data hafa avy amin'ny fitaovana iOS sy Mac mankany PC tsy misy iTunes.
Endri-javatra ny Transfer Android:
Mamela ny mpampiasa hamerina ny angon-drakitra rehetra avy amin'ny fitaovana iOS mankany amin'ny PC izy ary hamindra izany amin'ny fitaovana Apple hafa hananganana iPhone na iPad vaovao na fitaovana IOS hafa.
Tsy mila iTunes amin'ny famindrana data izany.
Rindrambaiko mifanentana be io.
Fidelia dia mpitantana mozika ary koa safidy hafa mahavariana amin'ny iTunes. Azo ampiasaina amin'ny fanitsiana sy fanaingoana endrika endrika horonam-peo sy horonan-tsary koa izy io.
Manohana endrika audio FLAC.
Izy io dia manana teknolojia iZotope ho an'ny fanovana mora sy kalitao.
Izy io dia manana interface tsotra ho an'ny karazana fanaingoana endrika endrika haino aman-jery.
Izy io dia asongadino tsara amin'ny virtualization headphone izay manome traikefa mahatalanjona ho an'ny mpampiasa.
iTunes indraindray dia afaka mamorona fanavaozana vaovao izay matetika tsy maintsy hitsidihanao ny fivarotana iTunes izay mety hahasosotra indraindray. Ary koa, isika rehetra dia samy manana ny takiny ao an-tsaintsika ho an'ny mpitantana haino aman-jery tonga lafatra.
Ny rindrambaiko solon'ny iTunes nosoratako etsy ambony dia mety ho tena ilaina ary azo ampiasaina ho solon'ny iTunes. Na te-hamindra mozika, sary, horonantsary, na rakitra hafa avy amin'ny fitaovanao IOS mankany amin'ny PC / Mac ianao, dia azonao atao ny mampiasa ireo rindrambaiko voatanisa ireo. Azonao atao ny misintona azy hanandramana azy ary hampiasa azy amin'ny ho avy raha mieritreritra ianao fa mety sy mahafeno izay ilainao rehetra.
tsy afaka mampifandray telefaona amin'ny iTunes
google an-trano ho an'ny Windows 10
tranonkala tsara indrindra amin'ny seho amin'ny fahitalavitra
misintona seho maimaim-poana sy sarimihetsika
ity lalao ity dia nanidy roblox